UThabekhulu uthi okufumbethe kunguwena, kuyikusasa nempilo yakho - Bayede News
Namuhla ngifisa sike sithi ukulumana indlebe ngendlela esikhuliswe ngayo emakhaya kusukela mhla sizalwa namakhono ethu, kube imfundo esinikwa yona kanye nenkolo yasemakithi.
Akujwayelekile ukuthi sicebisane ngokuthi engabe sibhekephi njengemindeni, hlobo luni lwabantwana esifisa ukubabona eminyakeni eminingi ezayo. Ukuze sibe nalo lolo hlobo lwabantwana sidinga ini njengamanje phakathi kwamakhono endalo, imfundo kanye nenkolo.
Lesi kuzoba ngesinye sezihloko ezimqoka futhi esizothandwa kakhulu emlandweni wezamaphephandaba. KwaZulu uma ingane izelwe, cishe sonke sesike sezwa ukuthi izalwa ifumbethe. Lokhu esuke ikufumbethe ilona khono layo ezophila ngalo iphinde yakhe ngalo umlando wayo lapha emhlabeni. Ikhono ezinye zezinto ezimqoka kakhulu empumelelweni yomuntu. EBhayibhelini incwadi yeZaga 18:16 ithi ikhono lakho ilona eliyokuvulela iminyango likwenze uhlale naMakhosi. Uma ubheka endimeni yezikaqedisizungu ikakhulukazi umculo, ukunandisa, ukulingisa kanye nakweminye iminxa cishe konke kulo mkhakha kubukeka kusebenza kahle ngekhono nje lilodwa elingaxutshwe nalutho.
Ubuciko bufana nokuthi into esizelwe nayo sonke ngoba zonke izingane ngaphambi kokuthi zihambe ziyadansa, ngaphambi kokuthi zibhale ziyadweba futhi ngaphambi kokuthi zikhulume ziyacula. Ingakho nje emculweni abantu abawufundele umculo abakaze bacule ingoma eshisa izikhotha nezohlukanisa unyaka. Isizathu salokhu ukuthi lo mkhakha ulawulwa ngabantu abaphiwe kakhulu emakhonweni kunabanye.
Ngaphandle kwekhono, yini umsebenzi wenkolo kumuntu nomuntu? Into engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ngenkolo ukuthi isigcine sisendleleni efanele. Inkolo kufanele isiqondise izigwegwe, njengoba neBhayibheli lithi izwi likaJehova lifana namadoda asiqondisayo endleleni. Inkolo kufanele isenze ngaso sonke isikhathi sikhumbule izwi likaJehova elisitshelayo ukuthi sizeleni emhlabeni.
Inkolo kufanele ihlumelelise onembeza bethu. Inkolo kufanele isenze sicabange ngokufa kaningana bese ngokuthuthumela senze lokho okuyintando kaSimakade. Inkolo kufanele isihluze izingqondo zethu, uma sikhuluma sikwazi ukubala amagama. Inkolo ngokusebenzisa abaphrofethi kumele isitshele lokhu esikwaziyo vele ukuthi sikuzele emhlabeni. Inkolo kemele isivule amehlo kamoya ukuze manxa kufika izikhathi zobunzima sazi ukuthi konke kunesikhathi sakho.
Inkolo kufanele isisize singawadeli amakhono neziphiwo zethu ngoba ekugcineni iwona uSimakade ayosibuza ngawo ukuthi asiwasebenzisanga ngani ukuze sizuze amanye na? Inkolo kumele isisize siqine imigogodla siphinde sazi ukuthi empilweni kukhona into eyodwa esiyizele kulo mhlaba, leyo nto kufanele siyilandele noma kunzima kunyukela endleni kodwa singayiyeki.
Encwadini kaLuka 10:41-42 uMartha ukhononda kuJesu ngokuthi yena wenza izinto eziningi, INkosi yaMakhosi yabe isimyala uMartha ngokuthi akenze into eyodwa edingekayo njengoba nabanye sebeyikhethile into eyodwa abazoyenza. Lesi isifundo sokuthi umuntu nomuntu kumele abe nento eyodwa okuyiyo emchaza noma engasekho.
Kulezi zinsuku iSABC ibivalelisa uNks uNoxolo Grootboom emuva kweminyaka engama-37 esebenzela le nhlangano esakaza ngomoya. UNks uGrootboom naye wenza into eyodwa edingekayo kuye okuwukufunda izindaba, esebenzisa ikhono elixutshwe nemfundo.
Asikuvume ukuthi ukuba ikholwa kuphela akuzi nesiqiniseko sokuthi umuntu uzoba nempumelelo kodwa lowo muntu usuke ezokwazi ukuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Sonke siyazi ukuthi ukuba namaphupho kuhambisana nokuthi uwasebenzele ukuze ube ngumuntu ebantwini. Encwadini kaDutheronomi 8:18 kuthiwa uNkulunkulu uyena okunika amandla okuzuza ingcebo.
Le ngcebo okukhulunywa ngayo lapha akusikho ukuzithela phezu kwebhodwe eligcwele imali yezipoki ligqitshwe ndawana thize, kodwa kuchazwa ukuthi uJehovah uyokunika ingqondo ehluzekile, umbono bese ekupha nomdlandla wokulandela lowo mbono. Ngala mazwi impumelelo iyamfica ngisho-ke umuntu engakholwa kodwa uma nje enza into ayithunywe esuka emaZulwini uyophumelela nakanjani, inqobo-ke ukubekezela ekulandeleni leyo nto eyodwa edingekayo.
Ake ngithathe amehlo ami ngiwabhekise kuMnu uRaymond Mnyamezeli Zondo onguShansela e-University of Zululand nowakuveza mhla egcotshwa kule Nyuvesi ukuthi imali abhalisela ngayo iziqu zomthetho wayicela kumqashi owesetshenzelwa unina emakhishini. Leyo ndoda yamnika imali nokuthe eseqalile ukutohoza esethi uyayikhokhela le ndoda yathi cha akangayikhokhi yona yayimsiza ngoba unina ebasebenzele kahle emzini wabo.
Namuhla uZondo useliSekela Mehluleli Omkhulu kuleli lizwe. Into uZondo ayenza kwaba ukulandela umbono otshalwe enhliziyweni yakhe nakuba isimo senkece sasisho okunye. Iwona-ke la mandla uJehova akunika wona ukuze ukwazi ukulandela into eyodwa empilweni yakho futhi ozophila ngayo.
Ingwadla esesibhekene nayo manje ukuthi abantu abaningi abasafuni ukuzibuza ukuthi bazeleni emhlabeni futhi yini abangayenza ukuze impilo yabo ibe ngcono kunalokho babuza ukuthi uHulumeni uzongakhela nini indlu yeRDP, indlu yangasese nezinye izinto?
Uma ubuka umlando kaBram Fischer kubo babengabantu abangeswele neze kodwa umbono owawukuye njengommeli kwaba wukuthi kufanele abantu balingane. Lokho kwaba iyona nto eyodwa ayiphilelayo futhi wayifela. Wagcina eboshiwe waze washonela ejele uFischer nokumanje alaziwa ithuna lakhe kodwa igama lakhe lisele njengoba kuqanjwe ngaye isikhumulo sezindiza eFree State.
Ngiyafisa sengathi wonke umuntu osaphila akubone njengesibusiso lokho bese enza into eyodwa ayizele noma ngabe kubiza ukuthi ayifele makube njalo hhayi ukukhalela izindlu ezincane nezindlu zangasese, imali yeqolo nama-R350 bese kuthiwa sekwanele.
Ezinye izinto esizizele emhlabeni siyokwazi ukuzifeza uma singamakholwa. Kanti ezinye ziyodinga imfundo. Bese kuthi ezinye zidinge amathalente. Umuntu akazibuze yena ukuthi eyakhe indlela idinga kuphi kulezi zinto ezintathu.
Ingakho kukhona abangakaze bafunde kodwa bayaphumelela, ingakho kukhona abangakaze balubhade esontweni noma enkonzweni kodwa bayaphumelela futhi abanye abazazi nokuthi imaphi amathalente neziphiwo abanakho kodwa bayadlondlobala kule ndlela abayikhethile.
Into emqoka ukuthi umuntu ayazi indlela yakhe nezidingo zayo. Abanye kuyenzeka bakhathale ngenxa yobude bendlela kodwa umbono iwona okufanele umhole phambili umuntu. Awusoze walubona utalagu uma ubheka eduze naseceleni, utalagu lubiza ukuthi ubheke phambili ukuze ulubone.
Uma ubona isifundiswa ungasigxeki, uma ubona ikholwa ungaligxeki, futhi uma umuntu onekhono kodwa engafundile futhi engakholwa ungagxeki ngoba indlela ayihambayo uyena owaziyo ukuthi idinga ini. Ungabona imihambima ingaka ezweni ungamangali ngoba mhlawumbe abanye bayeka izikole kanti indlela yabo izodinga imfundo.
Eminye imihambima yadelela ukholo kanti indlela okumele bayihambe izodinga insindiso. Eminye imihambima yalibala amankwebevu isakhula kanti indlela yabo idinga amakhono afana nokusubatha.
Awucabange nje ukuthi ukuba uZondo noFischer abayanga ukoyofundela ezomthetho babezoba yini? Awucabange ukuthi ukube uKhuzani noMroza Fakude bazibambezela ngesikole bayeka umasikandi babezozibhala nini izingoma ezizohlukanisa unyaka? Awucabange nje ukuthi ukube uMyles Munroe benoT.D. Jakes abazange babe amakholwa babezozibhala nini izincwadi ezinothe ngolwazi lokumazi uJehova?
Indlela esikhuliswa ngayo emakhaya akufanele ishayisane nezinto esibizelwe kuzo. Ingane nengane izalwa ifumbethe lokhu ezokudinga emhlabeni ukuze ikwazi ukuziphilisa, ithuthukise umndeni nesizwe ephuma kuso.
Uma inkolo, imfundiso kanye nosikompilo lomndeni lushayisana nombono otshalwe enganeni, kufanele leyo ngane ithi ingakhula isuke kulowo mndeni iyozimela le kude ukuze ikwazi ukwenza ngempumelelo lokhu efike ikufumbethe. Akekho umzali othokozayo uma ethuma ingane esitolo aze ayifumbathise nemali ezoyidinga phambili kodwa ingane ibuye ilengise izandla ingaphethe lutho.
NoMdali wethu uyozizwa enengekile ngathi njengoba esithume emhlabeni esifumbathise amandla namakhono kodwa mhla sibuyela kuye sifike sivathazela singaphethe lutho. Asikho isifundiswa okumele sife nezincwadi ezingabhalwanga, alikho iciko okumele life nezinkondlo ezingahaywanga, akekho umgcotshwa okumele ahambe nezambulo ezingakhulunywanga kwabangcwele bakhe.
nguMusa KMB Mpanza Apr 9, 2021